पत्रकार पुडासैनीको आत्महत्या प्रकरण: सञ्चारकर्मी रवि लामिछाने प्रहरी नियन्त्रणमा | - News Portal in Nepali
पत्रकार पुडासैनीको आत्महत्या प्रकरण: सञ्चारकर्मी रवि लामिछाने प्रहरी नियन्त्रणमा
वि.सं ३० श्रावण २०७६, बिहीबार २०:३४
काठमाडौँ: पत्रकार शालिग्राम पुडासैनीको आत्महत्या प्रकरणमा नयाँ मोड सिर्जना भएको छ।
आत्महत्या अघि पुडासैनीद्वारा रेकर्ड गरिएको भनिएको भिडियो सार्वजनिक भएपछी आवश्यक अनुसन्धानको लागि प्रहरीले सञ्चारकर्मी रवि लामिछानेलाई नियन्त्रणमा लिएको छ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनको अनुरोधमा सञ्चारकर्मी लामिछानेलाई नियन्त्रणमा लिएको महानगरीय प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीले पुष्टि गरेको छ।
लामिछानेसँगै न्युज २४ का पत्रकार युवराज कँडेललाई समेत प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। यसअघि प्रहरीले रुकु भनिने नर्स अस्मिता कार्कीलाई आजै दिउँसो प्रहरीले नियन्त्रणमा लिइसकेको थियो ।
अनुसन्धानका लागि तिनै जनालाई काठमाडौंबाट चितवन लगिने प्रहरीले बताएको छ ।
साउन २० गते राति नारायणढस्थित पोखरा बसपार्कमा रहेको होटेल कंगारु होटेलको २०२ नम्बर कोठमा सञ्चारकर्मी शालिग्राम पुडासैनी मृत अवस्थामा फेला परेका थिए। होटलको कोठा रहेको पङ्खामा डोरी लगाइ मृत अवस्थामा प्रहरीले फेला पारको थियो।
घटनास्थलमा भेटिएको मृतकको मोबाइलमा रहेको भिडियो थप प्राविधिक जाँचबुझका लागि प्रयोगसालामा रहदा एकाएक बाहिरिएपछि प्रहरीले लामिछानेलाई नियन्त्रणमा लिएको हो।
प्राप्त भिडियोमा पुडासैनीले आफ्नो आत्महत्याको कारण रवि लामिछाने, युवराज कँडेल र अस्मिता कार्की रहेको बताएको देखिन्छ।
यता चितवन प्रहरीले भने उनको पोस्टमार्टम रिपोर्ट र मोबाइलमा रहेको भिडियोको आधिकारिकताबारे प्राविधिक रिपोर्ट आइनसकेको बताएको छ।
पत्रकार पुडासैनी करिव दुई महिना अगाडि न्यज २४ बाट प्रशारण हुने ‘जनतासँग सीधा कुरा’मा कार्यरत थिए। दुई महिनायता भने पुडासैनी माउन्टेन टेलिभिजनमा ‘मिसन न्युज’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका थिए।
बुधवार सार्वजनिक भएको भिडियोमा मृत पुडासैनीले रुँदै भनेका छन् ‘रवि दाई, मलाई मर्न बाध्य बनाएकोमा तपाईंहरूलाई पाप लाग्छ। केही केही दीनदुःखीको उद्धार पनि गर्नुभयो, तर अरुको प्रगति देख्न सक्नुभएन। दुनियाँलाई थर्काउनुभयो, ढिलोचाँडो दुनियाँले तपाईंको असली रुप देख्नेछ। मसँग प्रमाण छ, आज नभए पनि भोलि तपाईंको पापको घडा भरिन्छ।’
आत्महत्या की हत्या? हो भन्ने विषय खुल्न सकेको छैन। आत्महत्या भएको भए कसले र किन बाध्य पार्‍यो? यस्ता प्रश्नको जवाफ प्रहरीले मात्र होइन आम मानिसले खोजी रहेका छन्।
सञ्चारकर्मी लामिछानेले घटनामा आफ्नो कुनै पनि संलग्नता नभएको, मृतक पुडासैनीलाई भ्रम परेको हुनसक्ने बताउदै आएका छन्,
यधपी आफूले प्रहरीको छानविनलाई सघाउने र आफू दोषी प्रमाणित भएमा हदैसम्मको कारबाही भोग्न तयार रहेको बताउदै आएका छन्।
किन लगाउने जनै ? जनैको धार्मिक तथा बैज्ञानिक महिमा
आज गाइजात्रा पर्व, मुलुकभरि विशेष कार्यक्रम गरी मनाइँदै